कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४२ हजार नाघ्यो ! – Sagarmatha Online News Portal
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४२ हजार नाघ्यो !
काठमाडौं । विश्व व्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)बाट मृत्यु हुनेको संख्या ४२ हजार नाघेको छ । हालसम्म ४२ हजार ३ सय ३४ जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भैसकेको छ ।
कोरोनाबाट सबैभन्दा बढि मृत्यु ईटालीमा १२ हजार ४ सय २८ जनाको भएको छ । दोस्रो बढि मृत्यु हुने देशमा स्पेन परेको छ । स्पेनमा ८ हजार ४ सय ६४ जनाको मृत्यु भएको छ । तेस्रो नम्बरमा विश्वकै शक्तिशाली मानिएको देश अमेरिका परेको छ । जहाँ ४ हजार ५४ जनाको मृत्यु भएको छ ।
त्यसैगरी चौथो नम्बरमा फ्रान्स छ । जहाँ ३ हजार ५ सय २३ जनाको मृत्यु भएको छ । पाचौं नम्बरमा चीन छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को शुरुमा संक्रमण देखिएको चीन अन्य देशको तुलनामा मृत्युदर धेरै कम भएको तथ्यांकले देखाएको छ । चीनमा अहिलेसम्म ३ हजार ३ सय ५ जनाले मात्र ज्यान गुमाएका छन् ।
छैठौंमा ईरान रहेको छ । जहाँ २ हजार ८ सय ९८ जनाको मृत्यु भएको छ । सातौंमा दोस्रो शक्तिशाली देश बेलायत परेको छ । बेलायतमा १ हजार ७ सय ८९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यसैगरी आठौं नम्बरमा नेदरल्याण्ड परेको छ । जहाँ १ हजार ३९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । नवौं नम्बरमा ७ सय ७५ जनाको मृत्यु जर्मनीमा भएको छ । र दशौं नम्बरमा बेल्जियम रहेको छ । जहाँ ७ सय ५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
अहिलेसम्म कारोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या ८ लाख ५९ हजार ३ सय ३८ जना पुगेको छ । १ लाख ७८ हजार १ सय २५ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । अहिलेसम्म २ सय ५ देशमा यसको संक्रमण फैलिसकेको छ ।